Soo dejisan CheMax 20.7 – Vessoft
Bogga rasmiga ah: CheMax
CheMax – software ah oo is haysta la database badan oo khiyaameeya si ay u fududeeyaan marinka kulan ee kombiyuutarka. software The kuu ogolaanayaa inaad ka gala codes iyo passwords in kulan caan ah ama u kiciyo oo isticmaalaya isku muhiimka ah. Games CheMax u saamaxaaya in ay baadhaan kulan by magaca ama in liiska kooban ee xuruufaha. software si joogto ah waa cusbooneysiisaa database ee kulan oo kala duwan oo kuu ogolaanaya in aad daabacdo ama badbaadin khiyaameeya ee faylasha. software waxay leedahay interface ah dareen leh oo fudud.
Tirada badan ee Qiyaanoole-codes
Suurtagalnimada in uu daabaco iyo kaydiso Qiyaanoole-codes in files ah
updates database joogto ah
Soo dejisan CheMax
Faallo ku saabsan CheMax
CheMax Xirfadaha la xiriira